कोरोनाको कहरः मनोसामाजिक समस्याको जोखिम - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ विचार/अन्तरवार्ता ∕ कोरोनाको कहरः मनोसामाजिक समस्याको जोखिम
कोरोनाको कहरः मनोसामाजिक समस्याको जोखिम
सिन्धु खबर मंगलबार, २०७७ वैशाख २३ / १६:०९
– गोपाल ढकाल (मनोविद )
मनमा कुरा खेल्नु ,झर्को लाग्नु, हातखुट्टा, जिउ काप्नु, कट्कट् खानु वा झमझमाउनु, जिउ सिरिंग हुनु, मुख सुक्नु, पसिना आउनु, टाउको( पेट दुख्नु, रिगंटा लाग्नु, मुटुको चाल बढ्नु, भोक तथा निन्द्रा नलाग्नु, छिटो छिटो पिसाब लाग्नु, कब्जियत हुनु , शरिरमा थकान लाग्नु, श्वास फेर्न गाह्रो भएको महसुस हुनु, छाती भारी हुनु, रिस उठनु, ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्नु, चाडै बिर्सनु, मन दुःखी हुनु, सामान्य भन्दा बढी डर, चिन्ता, पिर पर्नु, छटपटि हुनु, निर्णय लिन नसक्नु, डर लाग्दो सपना देख्नु, पटक–पटक झस्कनु, निराश हुनु, कुनै कुरामा चाख नलाग्नु, आफू वा परिवार कसैलाई केही होला कि भन्ने डर लाग्नु, शरीर तातो वा चिसो भएको महसुस हुनु जस्ता लक्षणहरु देखिन सक्छन् ।
मनका वह पोख्न पाउँदा, घरपरिवार, साथीभाई वा समाजको साथ र सहयोग मिल्दा, परिवारसँग बस्दा, सहयोगको आदान प्रदान हुँदा, सान्त्वना पाउँदा, विश्वस्त सुचना र उचित परामर्श पाउँदा, सुरक्षित वातावरण र अत्यावश्यक राहत पाउँदा, मनोरञ्जन, खेलकुद, व्यायाम, ध्यान पुजापाठ जस्ता कुरामा मन लगाउँदा, रिस र आक्रोश पोख्न पाउँदा मन खोलि रुन पाउँदा, सकरात्मक सोच राख्दा आफ्नो ध्यानलाई रमाइलो कुरामा मोडदा, दैनिक जीवनमा फर्कने प्रयास र धैर्यताले माथि भनिएका जस्ता लक्षणहरु समय बित्दै जादा आफै हराउदै जान्छन्।
केहिलाई भने लक्षण कम हुँदै जानुको सट्टा झन झन बढने पनि हुनसक्छ। जसले मनोसामाजिक समस्या वा मानसिक स्बास्थ्य समस्याको जोखिम बढेर जान्छ। यस्तो नहोस् भन्नका लागि स्वंय ब्यक्तिले आफ्न‍ो शारीरिक स्वास्थ्को साथै मनक‍ो स्याहारसुसारमा पनि बिशेष ध्यानदिनु जरुरी हुन्छ। जसलाई स्वहेरचाह भनिन्छ ।
१. कोरोनाको संक्रमणबाट ज‍ोगिन लकडाउनको पुर्ण पालना गर्नुपर्छ। सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्छ । सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्दा र सुरक्षाका उपायहरु अपनाउदा मन ढुक्क हुन्छ। यसले डर, त्रास, भय, चिन्ता धेरै कम भएर जान्छ। आफू स्वस्थ छु भन्ने आत्मबल बढछ।
२. फुर्सदको बेला मानसिक तनाव नहोस भनेर समय व्यवस्थापन गर्नु जरुरी हुन्छ। दैनिक कार्य तालिका बनाएर आफ्नो दिन चर्यालाई संतुलित बनाउन सकिन्छ। आफूलाई व्यस्त तथा सक्रिय राख्न सकिन्छ। यसो गर्नाले मनमा कोरोना सम्बन्धि कुरा खेल्न पाउदैन। नत्र जति बेला पनि कोरोनातिर ध्यान गई त्रास बढन सक्छ।
३. कोरोनाको जोखिमबाट जोखिन सत्य तथ्य जानकारी त लिने तर अति सतर्क हुने । चाहिने भन्दा बढी जानकारी लिन खोज्ने , समाचार पटक पटक हेरिरहने जस्ता व्यवहार गर्नुहुदैन।
४. सामाजिक सञ्जाल , इन्टरनेट चलाएर बस्ने भन्दा आफ्नो रुचिको काम गरेर समय बिताउन सकिन्छ। परिवारसँग कुराकानी गर्ने , खेल खेल्न, किताब पढ्ने, लेख्ने, मनोरञ्जन गर्ने, रमाईला र ज्ञान बर्द्धक फिल्म हेर्ने गर्न सकिन्छ । घरायसी काममा समय दिन सकिन्छ ।
५. तनाव कम गर्न शारीरिक व्यायम, योग, मेडिटेसन, श्वास प्रश्वासको व्यायम, ध्यान केन्द्रीत गर्ने अभ्यास तथा अन्य आरमदायी अभ्यासले ठूलो मद्दत पुर्‍याउछ। तनाबको बेला पर्याप्त निदाउनु जरुरी हुन्छ।
६. तनाबको बेला सजिलैसँग पच्ने तथा पोषण युक्त आहार खानुपर्छ। जाँडरक्सी तथा लागुपदार्थको सेवनले त झनै समस्या बढाउँछ।
– एन्जाईटी,विभिन्न किसिमका डर चिन्ता जन्य समस्याहरु ।
– डिप्रेसन दिक्दारिपन तथा आत्महत्याको सोचाई वा प्रयास ।
– मानसिक आघात-पिडादायिक घटना पछि उत्पन्न हुने एक किसिमको मानसिक रोग ।
– प्यानिक अट्याक-एक्कासि बिना कारण उत्पन्न हुने अत्याधिक त्रास ।
– समायोजनको समस्या-परिस्थितिसँग जुझ्न नसकिरहेको अबस्था ।
– अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअडर्स -एउटै सोच वा बिचार आईरहने तथा एउटै कार्य लगातार धेरै पटक दोहोर्‍याई रहने मानसिक रोग ।
– जाँड रक्सि , लागू प्रदार्थको लत ।
– कन्भर्सन डिसअडर्स – डर, त्रास , तनाबको कारणले देखिने मनोबैज्ञानिक समस्या ।
– एक्युट स्टेस डिसअडर्स-तत्कालै देखा पर्ने तनाब जन्य समस्या ।
प्रत्येक व्यक्तिको मानसिक क्षमता फरक फरक हुने हुँदा यसले पार्ने असर पनि फरक फरक हुन्छ । साथै व्यक्ति अनुसार कोहि चाडै सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्छन् भने केहीलाई सामान्य अवस्थामा फर्कन समय लाग्नसक्छ। धेरै जसो मानिसहरु ढिलो चाडो सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्ने भएतापनि केही प्रतिशत व्यक्तिहरुमा मानसिक समस्या देखिन सक्छ।